Madaxweyne Caalin oo maanta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. | Anti-Tribalism
← Cid waliba waa og tahay in TFG-du ayna xalaal ku dhisnayn
Halista Dastuurka Cusub ee Qabya qoraalka Somalia →
Madaxweyne Caalin oo maanta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho.
April 1st, 2012 – Madaxweynaha Maamulka Galmudug Maxamed Axmed Caalim ayaa maanta soogaaray magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya halkaasi oo ay ku soo dhaweyeen bulshada qeyba heeda kala duwan. Mr Caalin oo saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho aya sheegay in u jeedka ugu weyn ee uu Muqdisho u yimid ay tahay in uu dowladda kala hadlo arimo ku saabsan Qariirada Nabadda Soomaaliya ee Roadmap-Ka.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa sidoo kale xusay in ay jiraan howlo badan oo uu maamulkiisa deegaanada uu ka taliyo ka qabtay kuwaas oo uu ku sheegay in jidgooyooyin yiilay deeganada ay ka taliyaan in maamulku uu qaaday asagoo xusay in arintaasi ay ku garabsiiyeen dadka deegaanka.
Booqashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug Caalim ee Magaalda Muqdisho ayaa imaanaysa maalmo ka dib markii uu ka soo horjeestay kulankii looga hadlay Qariirada nabada iyo qodabadadii ka soo baxay Garoowe ee ka dhacay Magaalda Galkacyo ee Gobolka Mudug.